စွဲခြင်းနှင့်သိမှတ်ခြင်း (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
စှဲလမျးသူသိပ္ပံ Clin Pract။ 2010 ဒီဇင်ဘာ;5(2): 4-14 ။
သောမတ်စ်ဂျေသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, Ph.D ဘွဲ့ကို
ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်စွဲအခြေခံကြောင်းအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များသင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းအပါအဝင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့သောသူများနှင့်အတူကျယ်ပြန့်ထပ်။ အနာဂတ်မတရားသောနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုအခြေခံစေခြင်းငှါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအလွဲသုံးစားမှုမွေးစားခိုင်မာတဲ့ maladaptive အသင်းအဖွဲ့များ၏အစောပိုင်းအဆင့်နေစဉ်ယင်းဒေသများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မူးယစ်ဆေးလှုပ်ရှားမှု။ ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူသိမြင်လိုငွေပြမှုစဉ်ဆက်မပြတ် abstinence ထူထောင်၏အခက်အခဲပိုမိုဆိုးရွားကြောင်းတရပ်ပေါ်ပေါက်လာ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထိတွေ့မှုသိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်။ စိတ်ရောဂါလူနာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဘို့အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုပြဿနာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူး deleterious ဖြစ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပင် abstinence ၏တိုးချဲ့ကာလပြီးနောက်ဆက်လက်ရှိနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကိုမတရားသောအဖြစ်ဆေးခန်းတငျပွ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောရှုထောင့်ကနေစွဲလမ်းပြောင်းလဲသိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ စွဲအခြေခံကြောင်းအဆိုပါဦးနှောက်ဒေသများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှု, ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အပါအဝင်မရှိမဖြစ်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သောသူတို့နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ထပ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး maladaptive သင်ယူမှုမှတဆင့်ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့် abstinence ကိုထောက်ပံ့သောသပ္ပါယ်အပြုအမူတွေများ၏ဝယ်ယူဆီးတားကြောင်းသိမြင်ဆိုင်းထုတ်လုပ်ဤဒေသများတွင်ပုံမှန်ထက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်။
တစ်ဦး 2005 ပြန်လည်သုံးသပ်မှာတော့စတီဗင် Hyman ချုံမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လက်ရှိအာရုံကြောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖော်ပြထား: တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် Characterizing စွဲ "ရောဂါဗေဒသင်ယူမှု" ဟုသူက "ဟုရေးသားခဲ့သည် [တစ်] ddiction အောက်မှာကြောင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောယန္တရားများတစ်ဦးရောဂါဗေဒလုကိုယ်စားပြုတယ် ပုံမှန်အခွအေနဆုလာဘ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသောတွေကိုများ၏လိုက်စားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောရှင်သန်မှုအပြုအမူတွေကိုပုံဖော်ဖို့ဝတ်ပြုကြလော့။ "
ဤဆောင်းပါးသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်၎င်းတို့၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြု၏သိမြင်မှုဆိုးကျိုးများအပေါ်လက်ရှိအသိပညာသုံးသပ်ပြီး။ တစ်ဦးချင်းစီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်, စိတ်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလကနေကြာအရာကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, စဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးနားလည်မှုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု Clinician ဖော်ထုတ်ကုသလူနာများအား '' တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်ကြောင်းသိမြင်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ကူညီကြလိမ့်မည်။
တစ်ဦးက MULTISTAGE PROCESS
မကြာမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှစ်ဇာတ်စင်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ပထမအဆင့်မှာတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရံဖန်ရံခါမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေတိုးနာတာရှည်နှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့ဖြစ်လာသည်။ ဤအလက္ခဏာတွေများ၏အာရုံကြောအရင်းအမြစ်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ (ဖြစ်ပါတယ်Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2008) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤစနစ်-အထူးသ, အ ventral striatum သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်ထိုကဲ့သို့သော, ထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်နေရာအစာစားခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံအဖြစ်, orient သက်ရှိဘဝ-ရေရှည်တည်တံ့သောအခြေအနေများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်သောပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကို -produces အတွင်း dopamine အချက်ပြတိုးလာ ။ အလွဲသုံးစားမှု hyperactivate ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဒီစနစ်, NAc dopamine အချက်ပြအတွင်းရုတ်တရက်နဲ့ကြီးမားတဲ့တိုးထွက်လာပါတယ်နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေလှုံ့ဆော်ကြောင်းပြင်းထန်သောအာရုံကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် maladaptive မူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှင့်တင် (Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2008).
အစောပိုင်း abstinence, ပြန်သွားကြသည်မှမြဲအားနည်းချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များမြားတှငျပွောငျးလဲစဉ်အတွင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအပါအဝင်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပစ္စုပ္ပန်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ၏ဒုတိယအဆင့်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ။ အဆိုပါ dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်၏ပြုပြင်မွမ်းမံဒီအဆင့်မှာအရေးကြီးသောဖြစ်နေဆဲပေမယ့်, ကဖြစ်နိုင်သည်ဤရှုပ်ထွေးပြီးရှည်တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Kalivas နှင့် Volkow (2005) အဓိကအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကို-The prefrontal Cortex-ဖို့ NAc နှင့်ဆက်နွယ်သောဦးနှောက်ဧရိယာကနေ neurotransmitter အချိုမှုထမ်းအချက်ပြမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ implicating သက်သေအထောက်အထားအနှစ်ချုပ်။ သည် Le Moal နှင့် Koob (2007) ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့် (ထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစတင်ခြင်းအဖြစ် abstinence စဉ်အတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်စေတဲ့နေဖြင့်မူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးလှုံ့ဆော်ကြောင်းဆိုလိုသည်မှာသက်ရောက်မှု) ကိုအလေးပေး။ အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမူးယစ်ဆေးရှာနှင့်အသုံးပြုမှုအထောက်အကူပြုကြောင်း maladaptive မူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များလှုံ့သော်လည်းထို့ကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်သော abstinence များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းသိမြင်မှုနှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များနှောင့်အယှက်။
သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ '' သက်ရောက်မှု၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာမရှိသေးပါလူသိများပေမယ့်သုတေသနပြုစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် striatum, prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus (အပါအဝင်ဦးနှောက်ဒေသများမြားတှငျပွောငျးလဲရှိသည်ဆိုတာကိုပြသသည်မဟုတ်ဂျုံးစ်နှင့် Bonci, 2005; Kalivas နှင့် Volkow, 2005; ကယ်လီ, 2004; သည် Le Moal နှင့် Koob, 2007) ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်ဒေသများ (declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်-The ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးအယူအဆ generate ထိန်းသိမ်းနည်းရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အရာမပါဘဲတစ်ဦးချင်းသတ်မှတ်ကြောင်းအမှတ်တရများ, အခြေခံCahill နှင့် McGaugh, 1998; Eichenbaum, 2000; ကယ်လီ, 2004; Setlow, 1997) ။ declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်၏အလွှာအပျေါမှာလုပျဆောငျဖို့မူးယစ်ဆေးဝါး '' စွမ်းရည်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအလားအလာအလွန်ဝေး-သို့ရောက်ရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
acute Drug Administration ၏သိမြင်မှုအကျိုး
Clinician မကြာခဏ (မိမိတို့အစွဲဖွံ့ဖြိုးဘယ်မှာအခင်းအကျင်းသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြန်လာသည့်အခါစွဲများအတွက်ကုသမှုခံယူလူနာပြန်သွားကြသည်ဖို့အလွန်အမင်းအားနည်းချက်ဖြစ်လာကြောင်းစောငျ့ရှောကျHyman, 2005; 2005, ကြည့်ရှုပါ) ။ လက်တွေ့သုတေသနပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုမူးယစ်ဆေးများအတွက်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မတရားသောထုတ်ယူကြောင်းအတည်ပြု (Franklin et al ။ , 2007) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များလည်းမူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်အစွမ်းထက်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် cue-တုံ့ပြန်မှုအပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုး။ ဥပမာအားဖြင့်, နောက်ပိုင်းတွင်နှစ်ဆလှောင်အိမ်တွေထဲကအခန်းတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးပေးထားတိရိစ္ဆာန်များပိုကအခြားရွေးချယ်စရာအခန်းဖို့ထက်ကြောင်းအခန်းမှ gravitate ပါလိမ့်မယ်။ conditional ရာအရပျ preference ကိုအဖြစ်လူသိများဤဖြစ်စဉ်, (နီကိုတင်း, အီသနော, စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး, ကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, ဆေးခြောက်များနှင့်ကဖိန်းဓာတ်ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးBardo နှင့် Bevins, 2000).
စွဲလမ်းမှု၏ multistage မော်ဒယ်အစွမ်းထက်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာ inculcates တဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုမှမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုစွဲတစ်ဦးချင်းစီ '' အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှု attributes Robinson နဲ့ Berridge, 2000) ။ ဒီအမြင်အတွက်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးယူပြီးတစ်ဦးချင်းစီ (အဓိက) အလွန်အမင်းသိသာထင်ရှားသောအဖြစ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပစ္စုပ္ပန်ပတ်ဝန်းကျင်ရိပ် မိ. နှင့်ထိုပတ်ဝန်းကျင်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပြင်းထန်သောအပျော်အပါးအကြားအတော်လေးခိုင်မာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုစေသည်။ ထို့နောက်သူသို့မဟုတ်သူမသူတို့အား features တွေ re-ရင်ဆိုင်သောအခါ, အစွမ်းထက်အသင်းအဖွဲ့များသတိရှိရှိသို့မဟုတ်စဉ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြန်လည်နှင့်မူးယစ်ဆေးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေဘို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်အဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ ဤအကောင့်နှင့်ကိုက်ညီသူတို့ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူပေါင်းသင်းကြောင်းတွေကိုစွဲတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမတရားသော, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို (ဆိုလိုသည်မှာ striatum, amygdala, orbitofrontal cortex, hippocampus အတူ elicits , thalamus, နှင့်လက်ဝဲ insula) (Franklin et al ။ , 2007; Volkow et al ။ , 2006).
စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏စူးရှသက်ရောက်မှုဒီမြင်ကွင်းသို့ကျခွငျးမရှိ fit ။ ဒီဆေးတွေတစ်ခုချင်းစီ (acute သင်ယူမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်del et al ။ , 2007; Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008; Mattay, 1996) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆေးလိပ်သောက်တဲ့မှတ်ဥာဏ် Enhancer သောစိတ်ကူးကောင်းကောင်းသုတေသီများနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူကလက်ခံသည်။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ '' သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနီကိုတင်း၏ချက်ချင်းအောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေး (တိုးတက်စေကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီKenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008) ။ လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကို abstinence တဲ့ကာလအောက်ပါနီကိုတင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သူဆေးလိပ်သောက်သူများသောကြောင့်လူ့ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်အတူအစောပိုင်းလေ့လာမှုများတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်တွေ့ရှိချက်အပြီးသတ်သောကြဘူး။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့်မှုများမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ပုံမှန်သိမြင်အင်အားကြီးကျော်တိုးတက်မှုထက်ဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှုများမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြပေလိမ့်မည်။ စာပေ၏နောက်ဆက်တွဲသုံးသပ်မှု, သို့သော်, (စူးရှသောနီကိုတင်းနီကိုတင်း-ရင်တော့မှားမယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုswan နှင့် Lessov-Schlaggar, 2007) ။ ကိုကင်းမူးယစ်ဆေးနဲ့ကုသပြီးနောက်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြွက်များ၏လေ့လာမှုမှာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်; နောက်ပိုင်းတွင်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှ re-ထိတွေ့သည့်အခါတိရစ္ဆာန် (တိုးမြှင့်အာရုံကြောကို Activation ပြDevonshire, Mayhew နှင့် Overton, 2007).
အလွဲသုံးစားမှုမွေးစားသားအပေါငျးမူးယစ်ဆေးဝါးများခိုင်ခံ့သောမူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏သင်ယူမှုနှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးရှာပေမယ့်အချို့သင်ယူမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားအမျိုးအစားများအပေါ်ရောထွေးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် oxycodone ၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုလက်တွေ့လေ့လာမှုဒီဆေးတွေသိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် variable ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ကောက်ချက်ချ: ရုံအနည်းငယ်စကားပြေ၏နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်ယောက်ျားရဲ့ပြန်လည်သိမ်းဆည်း, ဒါပေမယ့်မော်ဖင်းအကိုက်အနည်းငယ်သောသူတို့အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တစ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း '' စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်း (ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်ဂဏန်းအစုတခုပြန်လုပ်ဖို့တောင်းခဲ့သည်Friswell et al ။ , 2008) ။ အခြားလေ့လာမှုများတွင်ကြွက်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ဆားပေးထားသောနှင့်တစ်ဦးအလင်းတစ်ဦးခြေမထိတ်လန့်မကြာမီခဲ့အချက်ပြလာသောအခါပြေးဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည် ဟူ. ၎င်း, ယင်းမော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်သူတို့လှုပ်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ရာနှင့်အတူကြိမ်နှုန်းနှင့် Quick အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူသော်လည်း, သုတေသီတိုးမြှင့်မော်တာလှုပ်ရှားမှုဤစွပ်စွဲထက် (သင်ယူခြင်းတိုးမြှင့်Aguilar, Miñarro, ရှိမုနျ, 1998) ။ အမြင့်ဆေးများ (သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှောင့်အယှက်: bidirectional သော်လည်းသိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် opioids ၏သက်ရောက်မှုမှမတူဘဲ, အရက်၏ရှိသူများ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းများမှာRyback, 1971), အနိမ့်ဆေးများသင်ယူခြင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်စဉ် (Gulick နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2007; Hernandez, ချစ်သူများနေ့နှင့် Powell, 1986).
မကြာမီကသုတေသနအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့် relapse ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါ maladaptive မူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏သိသိသာသာကြာရှည်စွမ်းရည်များအတွက်အကောင့်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လေ့လာရေးအများအပြားနှိပ်စက်တ္ထုများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် maladaptive မူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ဇွဲနှစ်ဦးစလုံးမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့်အာရုံခံ (Synaptic plasticity), အကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်နိုငျကွောငျးကိုပြသခဲ့ကြသည်။
ကိုကင်းနှင့်အနီကိုတင်းကိုတိုက်ရိုက်ရေရှည်အလားအလာ (LTP အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမှတဆင့် Synaptic plasticity ၏တဦးတည်းပုံစံ, အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများအားကောင်းသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်; စာမျက်နှာ 8 အပေါ်စိတ်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်သင်ယူခြင်းမြင် စားပွဲတင် 1()Argilli et al ။ , 2008; Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008) ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား (LTP မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်Delanoy, Tucci နှင့်ရွှေ, 1983) ။ ဆေးခြောက် (အာရုံခံအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုလျော့နည်းဖြစ်လာသည့်အတွက် Synaptic plasticity ၏အခြားပုံစံတုံ့ပြန်မှု, LTP နှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) နှစ်ဦးစလုံး၏အခြားသူတွေတချို့ဖြစ်ရပ်နှင့်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအတွက်တားစီးမှု, အ endocannabinoid system ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်Carlson, ဝမ်နှင့် Alger, 2002; Nugent နှင့် Kauer, 2008; လီဗန်, 2000) ။ , LTD တိုးမြှင့်နေချိန်တွင်အီသနောတသမတ်တည်း (LTP disruptsယဉ် et al ။ , 2007) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်း (neurotransmitter gamma-aminobutyric အက်ဆစ်ကနေတဆင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြကြောင်းအာရုံခံ (ဂါဘမြို့သား) ၏ LTP ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်Nugent နှင့် Kauer, 2008) ။ ဂါဘမြို့သားလှုပ်ရှားမှု၏တားစီးပုံမှန် maladaptive မူးယစ်ဆေး-အခြေအနေတွင်အသင်းအဖွဲ့များအပါအဝင်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, သောဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခြုံငုံတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
Synaptic plasticity ထိခိုက်နေဖြင့်မူးယစ်ဆေးမွေးရှည်တည်မြဲမူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ, လေ့လာမှုများ Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သော sequential ဓာတုဓါ (ဆဲလ်ပြကက်စကိတ်) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောတူညီသောပရိုတိန်း (မြင်သောသရုပ်ပြသောသက်သေအထောက်အထားအာူး ပုံ 1) မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူတွေအတွက်ကစားသို့ဝင်ကြလော့။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းစမ်းသပ်မှုအတွက်သုတေသီများ, ကြွက်သူတို့ကိုကင်းနှင့်အတူပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့တဲ့လှောင်အိမ်ဧရိယာမှသွားသောအခါ, ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်သင်ယူမှု-extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျးပရိုတိန်း kinase (ERK) နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသိသိ amp တုံ့ပြန်မှုပြသ element- ((CREB) binding, ဆတ်-1, သူတို့၏ NAc အတွက် Fos-တိုးလာMiller နဲ့မာရှယ်, 2005) ။ အဆိုပါကြွက်များ ERK ဖိနှိပ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်သည့်အခါထိုမှတပါး, သူတို့ဆားလက်ခံရရှိနှင့်ထဲမှာ LTP သုံးခုထဲကဓာတုပစ်စညျးပါဝင်သူတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း (CREB, ဆတ်-1 နှင့် Fos) ပြသခဲ့သောအတွက်တဦးတည်းကိုကျော်ကြောင်းလှောင်အိမ်ဧရိယာပိုနှစ်သက်ရပ်တန့် NAc ။
သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ထဲမှာကက်စကိတ်အချက်ပြတစ်ဦးကဆဲလ်
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု IN သိမြင်လိုငွေပြမှု
သူတို့ abstinence အစပျိုးလာသောအခါစွဲ၏ဒုတိယအဆင့်တိုးတဲ့သူမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆုတ်ခွာဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အတော်များများကမူးယစ်ဆေးဝါးများ abstinence ပိုပြီးခက်ခဲစေခြင်းအလိုငှါသိမှတ်ခံစားမှု-related ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ရန်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက်ကင်း-လိုငွေပြမှု (ကယ်လီ et al ။ , 2005);
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စိတ်ကြွဆေး-လိုငွေပြမှု (Dalley et al ။ , 2005);
သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက် opioids-လိုငွေပြမှု (Lyvers နှင့် Yakimoff, 2003);
အလုပ်လုပ် memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အရက်-လိုငွေပြမှု (Moriyama et al ။ , 2006);
သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ဆေးခြောက်-လိုငွေပြမှု (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, Gruber နှင့် Yurgelun-Todd, 2001); နှင့်
အလုပ်လုပ် memory နဲ့ declarative ဟူ. သင်ယူမှုအတွက်နီကိုတင်း-လိုငွေပြမှု (Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008).
နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ဥပမာပေးပါသည်။ နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးချုပ်ရာ (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှု, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှုနှင့်အမှတ်စဉ်ထို့အပြင်နှင့်အနုတ်အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ခေါင်းလောင်း et al ။ , 1999; Blake ကနှင့်စမစ်, 1997; Davis က et al ။ , 2005; Hughes က Keenan နှင့် Yellin, 1989; Jacobsen et al ။ , 2006; Mendrek et al ။ , 2006; Raybuck နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2009; Semenova, Stolerman နှင့် Markou, 2007) ။ ထို့အပွငျက (ဆေးလိပ်သောက် abstinence ၏ကာလအတွင်းမှာသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လျှောက်လျော့နည်း၏ပြင်းထန်မှု relapse ခန့်မှန်းကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်ပက် et al ။ , 2010; Rukstalis et al ။ , 2005) ။ ဤအလိုငွေပြမှုများသောအားဖြင့်အချိန်နှင့်အတူငျ့သှားပမေယျ့, နီကိုတင်း၏ထိုးလျှင်မြန်စွာ (သူတို့ကို ameliorate ပါလိမ့်မယ်Davis က et al ။ , 2005) အခြို့ relapses အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအခွအေနေ -a ။ ထို့ကြောင့်နာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအထူးသဖြင့် abstinence ၏အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာအသံထွက်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်လိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာနှင့်အတူဆက်စပ်သိမြင်လိုငွေပြမှုကိုမကြာခဏယာယီများမှာနေစဉ်, ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းသိမြင်မှုကျဆင်းရေရှည်တည်တံ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ လိုငွေပြမှု၏သဘောသဘာဝတိကျသောမူးယစ်ဆေး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်, အသုံးပြုသူရဲ့မျိုးရိုးဗီဇမိတ်ကပ် (စာမျက်နှာ 11 အပေါ် Gene, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုကိုကြည့်ပါ) နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သို့သော်, သူတို့ကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအောင်မြင်သောတုံ့ပြန်မှုမှအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းအတွေးနှင့်အပြုအမူသစ်ပုံစံများကိုသင်ယူနိုင်စွမ်းအယှက်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေရှည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်သတ်မှတ်ထားသောစကားလုံးများအားလေ့လာခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။Solowij et al ။ , 2002), ဤအလိုငွေပြမှုဆက်လက်ဘယ်လောက်ရှည်လျားပေမယ့်သေးလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဥပမာအဖြစ်, နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဘိန်းဖြူအသုံးပြုသူများကို (နှုတ် fluency, ပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှု, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အခြားဖို့ရည်ညွှန်း၏တဦးတည်းဘောင်ကနေအာရုံကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းအပါအဝင်သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးအတွင်းလိုငွေပြမှုကိုပြသOrnstein et al ။ , 2000) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလိုငွေပြမှုသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ၌တွေ့ရှိရသည့်သူများနှင့် - prefrontal cortex နှင့်ဆင်တူသည်။ရော်ဂျာ et al ။ , 1999).
မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏တစ်ဦးက pair တစုံ (အချို့ meth- စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်သိမြင်မှုဆုံးရှုံးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိုးချဲ့ abstinence နှင့်အတူ recouped စေခြင်းငှါအကြံပြုVolkow et al ။ , 2001; ဝမ် et al ။ , 2004) ။ လာသောအခါလျော့နည်းဘို့ abstinent6လအတွင်းထက်အကဲဖြတ်, နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံးမော်တာ function ကို, စကားပြောစကားများအဘို့မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြား neuropsychological အလုပ်များကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ် unexposed ထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါလိုငွေပြမှု dopamine ပို့ဆောင်ရေး (dopamine ထိန်းညှိကြောင်းပရိုတိန်း) ၏နှိုင်းယှဉ်ရှားပါးမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့် thalamus နှင့် NAc အတွက်ဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှု (ဇီဝြဖစ်) သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ abstinence ၏ 12 လ 17 ပြီးနောက် retested သောအခါ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု '' မော်တာ function ကိုများနှင့်နှုတ်မှတ်ဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့သူတို့အားချဉ်းကပ်ကြောင်းအဆင့်ဆင့်မှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်, နှင့်အကျိုးအမြတ်အတွက် striatum အတွက်ပုံမှန် Transporter အဆင့်ဆင့်နှင့်များတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ဆီသို့ပြန်လည်ဆက်နွယ်နေကြောင်း thalamus, သို့သော်အခြား neuropsychological လိုငွေပြမှုဟာ NAc အတွက်စိတ်ဓာတ်ဇီဝြဖစ်အတူကျန်ရစ်၏။
အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ 3,4-methylenedioxy-စိတ်ကြွဆေး (MDMA, ecstasy) အလွဲသုံးစားလုပ် (ပင် abstinence ၏ 2.5 နှစ်ကြာစကားပြောစကားများချက်ချင်းနှောင့်နှေးပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏စမ်းသပ်မှုအတွက်အတော်လေးညံ့ဖျင်းဂိုးသွင်းဆက်လက်Thomasius et al ။ , 2006) ။ ၏5လကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူဖြစ်စေဘို့အဓိကဦးစားပေး, အလုပ်အမှုဆောင် function ကို-defined fluency ပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်လိုငွေပြမှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, ဆင်ခြင်ခြင်း, တုံ့ပြန်မှုတားစီး, သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-ကျန်ရစ်တက်ပြီးနောက်ဖော်ပြထားခဲ့သော polydrug အချိုးဖောက်ဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ abstinence (Verdejo-Garcia နှင့် Perez-Garcia, 2007).
အရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုနီကိုတင်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်အကျိုးအတွက်နာတာရှည်ဖို့ကြိုကြားကြိုကြားအနေဖြင့်ဆိုင်းဆေးလိပ်အဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအချို့သောလေ့လာမှုတွေအတွက်, (နာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သိမြင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်, ဒါပေမဲ့တခြားလေ့လာမှုတွေကနဦးတိုးတက်မှုနာတာရှည်ကုသမှုနှင့်အတူမှေးမှိန်တွေ့ရှိခဲ့Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008) ။ ထို့အပြင်အတော်ကြာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ပြခဲ့ကြပြီးသမိုင်းဆေးလိပ်တစ်အတိတ်မှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်တသားတလေ့လာမှုမှာ, ဆေးလိပ်သောက်5နှစ်အတွင်း '' သိမြင်မှုအမြန်နှုန်းကို non-ဆေးလိပ်သောက်အဖြစ်နီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်တာငြင်းဆိုခဲ့သည် '; အပြင်, ဆေးလိပ်သောက် '' သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုအတွက်ငြင်းပယ် 2.4 ကြိမ်နှင့် 1.7 ကြိမ်ကွေ၏သက်ဆိုင်ရာနှုန်းထားများ (အနည်းဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်Nooyens, ဗန် Gelder နှင့် Verschuren, 2008) ။ မကြာမီက quitters '' ဤဒေသများအတွက်ရမှတ်များဆေးလိပ်သောက်ဆင်တူခဲ့ကြသည် 'နှင့်ဟောင်းဆေးလိပ်သောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအကြားအလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှုမှာ, ဆေးလိပ်သောက်အမြင်အာရုံရှာဖွေ၏နှုတ် memory နဲ့မြန်နှုန်း၏စမ်းသပ်မှုအပေါ် '' စွမ်းဆောင်ရည်ကွေထက် 10 နှစ်အတွင်းကိုပိုဆိုးရွား '; ဟောင်းဆေးလိပ်သောက်သူများ (အဖြစ်ကောင်းစွာ '' အမြင်အာရုံရှာဖွေရေးမြန်နှုန်း Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများထက်ပိုမိုနှေးကွေး ''Richards et al ။ , 2003) ။ တချို့အစောပိုင်းလေ့လာမှုများဆေးလိပ်သောက်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အတူဆက်စပ်သိမြင်မှုကျဆင်းနှောင့်နှေးစေခြင်းငှါအကြံပြုပေမယ့် (ဗန် Duijn နှင့် Hofman, 1991), (နောက်ကလိုက်လေ့လာမှုများဒီအတည်ပြုပေးရန်ပျက်ကွက်နှင့်အခြားသူများအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်နှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်အရေအတွက်နှင့်ကြာချိန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းswan နှင့် Lessov-Schlaggar, 2007).
ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေကြပြီးဆက်ရှိနေသေးကြောင်းသိမြင်မှုကျဆင်းအခြေခံနိုင်ကြောင်းအာရုံခံလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်နီကိုတင်း-related ပွောငျးလဲသရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, နီကိုတင်း၏ကြွက် '' Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆဲလ်ကော်မော်လီကျူးများအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအသစ်အာရုံခံဆဲလျထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း, နှင့် hippocampus အတွက်ဆဲလ်အသေခံခြင်းတစ်ခုတိုး (နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Abrous et al ။ , 2002) ။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းကြာရှည်မှတ်ဥာဏ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
လူ့ဦးနှောက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေတဆင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလကနေအရေးကြီးသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ခိုင်မာအောင်ဆက်လက်။ ထိုအနှစ်အတလျှောက်လုံးဦးနှောက်အလွန်အမင်းပျော့ဖြစ်ပြီး, အာရုံကြော plasticity ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဦးနှောက်ရငျ့၏ပုံမှန်သင်တန်းနေမှုကိုအာရုံလွှဲစေနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များကိုကောင်းစွာသိနေသောခေါင်းစဉ်: သန္ဓေသားအရက်ရောင်စဉ်မမှန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဦးဆောင်အကြောင်းမရှိ (များမှာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး, 2009 အဘို့အစင်တာများ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သန္ဓေသားအရက်ထိတွေ့မှု (နောက်ပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပြဿနာလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးပွါးYates et al ။ , 1998).
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်အရေအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှုဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အဆင့်အထိမထစခွေငျးငှါသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်သိသာထင်ရှားသော deleterious သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဘယ်သူ၏မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက် unexposed ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်အနေဖြင့်အရက်, ကင်းနှင့် / သို့မဟုတ် opiates ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့5နှစ်အရွယ်။ ထောက်လှမ်းရေး, ကို manual / အမြင်အာရုံ Dexter, ဒါမှမဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုအတွက်သားသမီးများ၏အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (ဤအစီအမံများပေါ်တွင်စံတန်ဖိုးနည်းလမ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာချPulsifer et al ။ , 2008) ။ အရက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်မှမွေးဖွားမီနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကို 10 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များအတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုမှတ်တမ်းတင်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှု (ရစ်ချတ်ဆန် et al ။ , 2002).
လက်တွေ့နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနနှစ်ဦးစလုံးသိမြင်လိုငွေပြမှုနှင့်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်စိတ်ကြွဆေးမှ Pre-Natal ထိတွေ့ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတိုတောင်းအာရုံကို span ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် 18 အသက် 27 ကလေးများအကြား (-30 ရာခိုင်နှုန်းကို -19 မှ) လျှော့ချသည့် putamen (-20 ရာခိုင်နှုန်း) အတွက်အသံအတိုးအကျယ်, globus pallidus (-15 ရာခိုင်နှုန်းကို -3 မှ) နှင့် hippocampus နှင့်အတူမှတ်ဉာဏ်နှောင့်နှေး မွေးဖွားမီထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, လှုံ့ဆော်ထိတွေ့နေသော 16 နှစ်Chang et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး-ထိတွေ့ကလေးများလည်းဆင်းရဲတဲ့ရေရှည် Spatial memory နဲ့အမြင်အာရုံ / မော်တာပေါင်းစပ်ပြသ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု (3- ၏တိုကျရိုကျနှင့် parietal cortex အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှမွေးဖွားမီနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကို4နှစ်အရွယ်ကလေးများမှတ်တမ်းတင်ရင်ခွင် et al ။ , 2009) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ကြွဆေးနဲ့ကုသခဲ့ကြွက် (သူတို့လူကြီးရောက်ရှိသောအခါ Spatial ဆက်ဆံရေးသင်ယူဖို့နှေးကွေးခဲ့ကြ, ထိုခွေးများကိုဘွားမြင်လေ၏နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းပြAcuff-Smith က et al ။ , 1996; Slamberová et al ။ , 2005).
ဤမျှလောက်များစွာသောကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များဆေးလိပ်သောက်ဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန့်မှန်းချက်တစ်ခု, 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆေးရွက်ကြီးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်ရည်မှတ်နေကြတယ်Hamilton က et al ။ , 2007). သန္ဓေသားဘခုနှစ်တွင် ဆေးရွက်ကြီးဘေးထွက်မှထိတွေ့မှု (ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Dwyer, Broide နှင့် Leslie, 2008) ။ အချို့လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့ယေဘုယျထောက်လှမ်းရေးကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုအကြံပြု; ဥပမာအားဖြင့်တဦးတည်းထိတွေ့လာနှင့် unexposed လူလတ်တန်းစားမြီးကောင်ပေါက် (ဥပမာအကြား Full-စကေးအိုင်ကျူအတွက် 12-အမှတ်ကွာဟချက်ကိုတွေ့ ကြော်စား, Watkinson နှင့် Gray, 2003) ။ အခြားလေ့လာမှုများတွင်အာရုံစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) ရှိခြင်း၏လေးသာမှု (သကွေမိခင်ကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်အဘယ်သူ၏မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သောက်သည်မြီးကောင်ပေါက်ဘို့ထက်ပိုမိုသုံးကြိမ်အဖြစ်အကြီးအခဲ့ကြသည်Pauly နှင့် Slotkin, 2008).
ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့အောက်ပါသိမှုလိုငွေပြမှုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုများတွင်မွေးဖွားမီထိတွေ့ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက် (မွေးဖွားမီထိတွေ့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ parahippocampal နှင့် hippocampal function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် တွဲဖက်. သာ. ကြီးမြတ် visuospatial မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုရှိခဲ့Jacobsen et al ။ , 2006) ။ မွေးဖွားမီဆေးလိပ်သောက်ထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ် (သို့လျှော့ချ cortical ထူထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်Toro et al ။ , 2008) နှင့် cortical အဖြူရောင်အမှု၌ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲ (Jacobsen et al ။ , 2007) ။ ထို့အပြင်ကြွက်အတွက်နီကိုတင်းဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထိတွေ့ခြင်းဟာ hippocampus အတွက်မှတ်ဉာဏ်-related အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အထီးနှင့်လူငယ်လူကြီးများအဖြစ်သိသိသာသာနည်းပါးလာမှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုဖေါ်ပြခြင်းအမျိုးသမီးမွေးဖွားမီထိတွေ့ကြွက် (အတူတက်ကြွစွာရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှုအတွက်လိုငွေပြမှုအတွက်ရလဒ်Vaglenova et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားလိုငွေပြမှုယောက်ျားကြွက်, ဒါပေမယ့်မအမျိုးသမီးအကြားနောက်ပိုင်းမှာလူကြီးသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များများထဲတွင်နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖြစ်လာ၏မြင့်အန္တရာယ် (ဖြစ်ပါတယ်ဖာဂူ, Woodward နှင့် Horwood, 1998) ။ ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖြတ်ပြီးတငျပွနှင့်မိသားစုအဆောက်အဦများဖျက်ဆီးတဲ့အောက်ဖက်လိမ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ဒီဒုက္ခသည်။ အကွိမျမြားစှာအချက်များသိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပါအဝင်အနာဂတ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှု, အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြီးသားပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်, ADHD ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုအလွန်ကြီး (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အဘယ်သူ၏မိခင်သောက်သည်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်တိုးပွါးPauly နှင့် Slotkin, 2008) ။ ADHD မကြာခဏ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူ comorbid ဖြစ်ပါတယ်Biederman et al ။ , 2008; Molina နှင့် Pelham, 2003), သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများကြားက link တစ်ခုအကြံပြုခြင်း။ နောက်ထပ်အလုပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုအခြေခံသောယန္တယားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက် High-အန္တရာယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကစွဲဆေးလိပ်သောက်ပထမဦးဆုံး (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအလေ့အထကိုဖွဲ့စည်းခဲ့Khuder, Dayal နှင့် Mutgi, 1999) ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သိမှတ်ခံစားမှုသက်ရောက်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, နှုတ် comprehension, ပါးစပ်ဂဏန်းသင်္ချာနှင့်အာရုံမှတ်ဉာဏ် (စမျးသပျမှုအပေါ်အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ကွေထက်ပိုဆိုးသွင်းယူကြော်စား, Watkinson နှင့် Gray, 2006; Jacobsen et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားလိုငွေပြမှုနှိုင်းယှဉ်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်မှာကနျြရထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင် memory နဲ့ဂဏန်းသင်္ချာစွမ်းဆောင်ရည်၏ခြွင်းချက်နှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်၏ချုပ်ရာအပျေါမှာပြေလည်။ (ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းထိတွေ့ Impulse တိုးတက် visuospatial အာရုံကိုလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှင့်လူကြီးအတွက် medial prefrontal cortical dopamine ဆိပ်ကမ်း၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်Counotte et al ။ , 2009) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နီကိုတင်းနဲ့ကုသဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (တွေ့မြင်အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြသည့် adenylyl cyclase ဆဲလ်များ၏ sensitivity ကိုတာရှည်-တည်မြဲအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့ ပုံ 1သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် (အပါအဝင်များစွာသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်), ဒုတိယ messenger ကိုလမ်းကြောင်း,Slotkin et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အစပိုင်းတွင်တွေ့မြင်အချို့သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, ပြန်လည်သုံးသပ်ဤသက်ရောက်မှု၏လွန်ကျူးခြင်းနှင့်ပင်လိုငွေပြမှု (မှဦးဆောင်ကြောင်းနီကိုတင်းသရုပ်ပြလေ့လာမှုများနှင့်အတူကောင်းစွာ fit Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008).
ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်သည်အခြားမမှန်များ၏မြှင့်တင်ရေးကတဆင့်, သွယ်ဝိုက်သိမြင်မှုကျဆင်းအားပေးမည်ဟုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်စီးကရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (စိတ်ကျရောဂါ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Choi et al ။ , 1997), အလှည့်အတွက်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဒေနာ (သောမတ်စ်နှင့် O 'Brien, 2008) ။ တစ်ဦးကဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဒီဆကျဆံရေးအပျေါအလငျးဖွာ: မိမိတို့၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့အရွယ်ရောက်ကြွက် / စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဆုချီးဖို့ထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့သက်သေထူခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် anxiogenic လှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှု (Iñiguez et al ။ , 2009).
ထိုကဲ့သို့သောအရက်, ဆေးခြောက်နှင့် MDMA အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားတ္ထုများမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှု, အစ (သိမှတ်ခံစားမှု၏ persistent ပြတ်တောက်စေဘရောင်း et al ။ , 2000; O'Shea, လို့ McGregor နှင့်ဆောက်ပုတ်, 2006; Piper နှင့် Meyer, 2004; Stiglick နှင့် Kalant, 1982) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲသောဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုထံမှစော်ကားဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့စော်ကားမှုရှည်တည်မြဲထိခိုက်စေပြောင်းလဲမှုများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူး။ ညွှန်ပြ
မူးယစ်ဆေး-related သိမြင်လိုငွေပြမှုသည်အဘယ်သူ၏သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြီးသားတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းရောဂါအားဖြင့်အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏သုခချမ်းသာဖို့အထူးသဖြင့်ထိခိုက်နေပေမည်။ ထိုမှတပါး, စိတ်ရောဂါခံစားရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအထွေထွေသောလူဦးရေထက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာမူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစား။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလေးနက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှု (အကြားတွင်အဖြစ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အလုနီးပါးနှစ်ကြိမ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏SAMHSA, 2007, p ။ 85) နှင့်ကအမေရိကန်၏ထက်ဝက်ကျော်အရက်ဖယ်ထုတ်ပြီးမူးယစ်ဆေးမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ () ကိုလည်း (စိတ်ရောဂါရှိသည်ခန့်မှန်းRegier et al ။ , 1990) ။ တစ်ဦး 1986 လေ့လာမှုများတွင်ဆေးလိပ်သောက်နှုန်း (schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါသို့မဟုတ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, ကိုနောက်ကောက်နှင့်အတူလူနာအတွက် 30 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 47 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူလူနာ, လူဦးရေ-based ထိန်းချုပ်မှုအတွက် 78 ရာခိုင်နှုန်းကို 88 ရာခိုင်နှုန်းကို approximatedHughes et al ။ , 1986).
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် schizophrenia ၏ဖြစ်ရပ်သိမြင်ကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သိမြင်လိုငွေပြမှုတပ်ဆင်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများထဲမှဥပမာအားပေးပါသည်။ အများအပြား comorbidities နှင့်ဝသကဲ့သို့, ထိရောက်သောကုသမှုဖွယ်ရှိအဘယ်ကြောင့်အခြေအနေနှစ်ခုဒါမကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း untangling တောင်းမည်:
အချို့ကသက်သေအထောက်အထား schizophrenia နှင့်အတူလူနာ Self-စေရန်ဆေးဆေးလိပ်သောက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆေးလိပ်သောက်သတင်းအချက်အလက်ကိုစီစစ်ရန်စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၌တွေ့မြင်သိမြင်မှုနှောင့်အယှက်အခြို့အဘို့အကောင့်လိမ့်မယ်အရာ, (အာရုံခံ Gates) လှုံ့ဆော်မှုရန်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအတွက် schizophrenic လူနာ '' လိုငွေပြမှုနောက်ကြောင်းပြန်။ သုတေသီများ (ထိုα7နီကိုတင်း acetylcholinergic အဲဒီ receptor subunit များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇတစ်မူကွဲမှ schizophrenia ၏ဤအင်္ဂါရပ်ခြေရာခံကြပါပြီLeonard et al ။ , 2001) ။ ဒီအမွငျနှငျ့ကိုကျညီ (မအရာ, haloperidol ပေးထားသည့်အခါထက်လွတ်လပ်စွာဒီလိုငွေပြမှုလျော့ချသော antipsychotic clozapine, ပေးထားသည့်အခါလူနာလျော့နည်းဆေးလိပ်သောက်တဲ့လေ့လာရေးဖြစ်ပါသည်McEvoy, Freudenreich နှင့် Wilson က, 1999).
ဒါဟာအစ (schizophrenia မီးခိုးနှင့်အတူလူနာ antipsychotic ဆေးဝါး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီGoff, Henderson နှင့် Amico, 1992) ။ ဒီအယူအဆကိုထောက်ခံပါတယ်တစ်ခုလေ့လာရေး schizophrenia နှင့်အတူလူနာလာသောအခါ unmedicated (ထက် antipsychotic haloperidol ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပိုပြီးဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်McEvoy et al ။ , 1995).
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် schizophrenia အကြား link ကိုများအတွက်နောက်ထပ်အကြံပြုရှင်းပြချက်ကိုယ်တိုင်ကဆေးလိပ်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ predisposed လူ schizophrenia precipitate စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ schizophrenics များထဲတွင်ဆေးလိပ်သောက် (နာမကျန်းတစ်ခုအစောပိုင်းကစတင်ခြင်းရှိပိုပြီးမကြာခဏဆေးရုံတွေမှာလူနာရောက်ရှိမှုလိုအပ်နှင့် antipsychotic ဆေးဝါးများပိုမိုမြင့်မားဆေးများကိုလက်ခံရရှိGoff, Henderson နှင့် Amico, 1992; ကယ်လီနှင့် McCreadie, 1999; Ziedonis et al ။ , 1994).
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆေးလိပ်သောက်သူနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းနောက်ထပ်မှတ်ဉာဏ်ရောဂါ ADHD ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ADHD နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာနီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကပြသသောသူတို့အားဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှစ်ဦးစလုံး (အ acetylcholinergic စနစ်ပြောင်းလဲမှစွပ်စွဲခဲ့ကြBean နှင့် Marrocco, 2004; Kenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008) ။ ADHD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဆေးလိပ်သောက်၏မြင့်ပျံ့နှံ့ (လမ်းဘတ်နှင့် Hartsough, 1998; Pomerleau et al ။ , 2003စူးရှသောနီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းတချို့ ADHD Attention Deficit reverse နိုငျသောကွောငျ့) (Self-စေရန်ဆေးအနေနဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်Conners et al ။ , 1996) ။ ADHD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရောဂါမရှိဘဲအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေခံရအဖြစ်ရုပ်သိမ်းရေးကိုရှောင်ရှားရန်အလိုဆန္ဒ (ဒီလူဦးရေအတွက်ဆက်လက်ဆေးလိပ်သောက်များအတွက်အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်နိုင်သည်Pomerleau et al ။ , 2003), နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာအောက်ပါ ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေတိုး (relapse ၏ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Rukstalis et al ။ , 2005) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသို့သော်ကိုယ်တိုင်ကအတွက်ဆက်လက်ဆေးလိပ်သောက် (သိမြင်မှုကျဆင်းစေနိုင်သည်Nooyens, ဗန် Gelder နှင့် Verschuren, 2008; Richards et al ။ , 2003), နှင့်ဤအရပ်မှ ADHD-related လက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးရွားပေလိမ့်မည်။
နီကိုတင်းနှင့်အတူ ADHD လည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆေးခြောက်အဖြစ် psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ, (များ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Elkins, McGue နှင့် Iacono, 2007; Galéra et al ။ , 2008; တန် et al ။ , 2007) ။ ထိုသို့သောအလွဲသုံးစားမှုလည်း (စိတ်ကြွဆေး ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်အဖြစ် Self-ဆေးမှာကြိုးစားမှုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါDopheide နှင့် Pliszka, 2009; Kollins, 2008) ထိုသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ် (Bean နှင့် Marrocco, 2004) ။ ADHD ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အချို့ (dopaminergic function ကိုတစ်လျှော့ချရေးကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါVolkow et al ။ , 2009), တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်လျော်ကြေးငွေစေခြင်းငှါအရာ (Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2008).
မူးယစ်ဆေး-related သိမြင်အပြောင်းအလဲများကိုဘက်လိုက်မှုလူနာစွဲ၏သံသရာမှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များဆီသို့ may အဖြစ်ကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါစာပေ, စွဲလမ်းများအတွက်လူနာများကိုကုသတဲ့အခါမှာအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်သိမြင် function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ Clinician လူနာလူနာသူတို့ရဲ့ကြိုတင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြန်လာသည့်အခါပြန်သွားကြသည်အထောက်အကူပြုသောခိုင်ခံ့သောအသင်းအဖွဲ့များကိုကျော်လွှားရန်သပ္ပါယ်မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်ကူညီပေးနေ၏စိန်ခေါ်မှုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သိမြင်လိုငွေပြမှုအကြံပေးခြင်းကနေအကျိုးခံစားရဖို့လူနာတွေကို '' စွမ်းရည်ကိုဆီးတားစေခြင်းငှါ, ပိုပြီးအစည်းအဝေးများနှင့် / သို့မဟုတ်သတိပေးချက်များသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ abstinence-တည်တံ့ခိုင်မြဲမဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းတွင်ဤလူနာအကူအညီလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
စွဲအတူလိုက်ပါကြောင်းသိမှတ်ခံစားမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်သင်ယူမှုနှင့်စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအလွှာသို့သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်ဆဲဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းအပေါ်အမြင်များပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်သည့်အလားအလာရှိပါတယ်။ ဥပမာ, စွဲလမ်းလယ်ပြင်၌စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ပေးသောမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း (insula ပျက်စီးမှုခံစားခဲ့ရသူကိုဆေးလိပ်သောက်မကြာခဏဆေးလိပ်သောက်သူတို့၏အလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းNaqvi et al ။ , 2007) ။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏စာရေးဆရာများအဆိုပါ insula ဆေးလိပ်သောက်ဖို့သတိတတ်ပြီးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့် function ကို insula modulate ကြောင်းကုထုံးဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းကြောင်းအဆိုပြုထား။ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုဘို့ဒါဟာအစကို (insula ပျက်စီးမှုအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒအပေါ်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည် စတိန်း et al ။ , 2009).
အလွဲသုံးစားမှုပြောင်းလဲမှုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏မည်သို့မည်ပုံတ္ထုများ၏တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုစွဲပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု ameliorate အသစ်ကုထုံးအေးဂျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, အလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကွဲပြားခြားနားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆဲလ်အချက်ပြလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ပေါ်လာပါသည်။ ပင်အတူတူပင်မူးယစ်အသုံးပြုသူများအကြား, သိမြင်သက်ရောက်မှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်မူကွဲပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအပေါ်တစ်ဦးချင်းရဲ့ဗီဇနောက်ခံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနားလည်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ genotype ကိုက်ညီနိုင်ပိုပြီးထိရောက်သောကုသမှုအသိပေး၏ဂတိကိုကိုင်ပြီး, အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အရေးပါဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှုစွဲနှင့်အခြားပြဿနာများကိုဖို့မျိုးဆက်သစ်ရဲ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးပွါးအဖြစ်တစ်ဦးမြင့်မားသောဦးစားပေးဖြစ်သင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဘယ်လိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့နားလည်သဘောပေါက်အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးပြောင်းလဲစေပါသည်။
တစ်ဦးကစိတ်ကိုသိတော့: ဒါဟာဖမ်းယူခြင်းနှင့်သိုလှောင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်တွေ့ကြုံနှင့်သူတို့စပ်ကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိ။ စိတ်ကိုသင်ယူဖို့အဘို့, ဖြစ်ရပ်များဦးနှောက်ထဲမှာဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအယူအဆအဘို့သက်သေသာဓကများအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုကိုအပိုင်းပိုင်းများထဲတွင်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာပေးရပြီးနောက်သင်ယူဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အကြီးအကျယ်လျှော့ချခံစားခဲ့ရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏အမှုများစွာရှိပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံး, ဖြစ်ကောင်း, (မိမိအဝက်ရူးပြန်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်အသက်အရွယ် 27 မှာကျယ်ပြန့်သည်ဦးနှောက်တစ်သျှူးများ၏ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီးနောက်လုံးဝသည်သူ၏ရေရှည် declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ, ဟင်နရီ Molaison ဖြစ်ပါသည်Penfield နှင့် Milner, 1958) မိမိအသက်တာ၏ကျန်ရှိသော 55 နှစ်ပေါင်းသူကပိုပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အစောပိုင်းကထက်သူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်ကြောင်းဘာမှစိတ်ထဲမှမခေါ်နိုင်အောင်။
neuroscience သုတေသနဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောကွန်ရက်များပီပီနှင့်အတူသင်ယူဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်။ အတော်များများကစမ်းသပ်ချက်သင်ယူမှုရာအရပ်ကိုကြာအဖြစ်, မရွေးအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုဖွဲ့စည်းရန်သို့မဟုတ်အခြားအာရုံခံ၏ကွန်ရက်များနှင့်အတူထူထောင်ဆက်သွယ်မှုခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာတည်ပါပွီ။ ထိုမှတပါး, အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Networking တားဆီးကြောင်းစမ်းသပ်နည်းစနစ်သင်ယူမှုတားစီး။
တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ neuroscience သုတေသနဦးနှောက်သင်ယူခြင်းကိုထောကျပံ့သောအာရုံကြောကွန်ရက်များ constructs နှင့်ထိန်းသိမ်းထားဘယ်လို elucidating ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ထုတ်ရေရှည်အလားအလာ (LTP), သင်ယူမှု၏အပြိုင် key ကိုရှုထောင့်အင်္ဂါရပ်တွေရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အာရုံပေါင်းသင်းတတ်ရန်သင်ယူပြီးတာနဲ့တဦးတည်း၏ဖြစ်ပျက်မှုအခြားအောက်မေ့မြွက်ဖွယ်ရှိသည်။ အလားတူပင် LTP အားလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အာရုံခံဆဲလျ, ဒါမှမဟုတ် high-အကြိမ်ရေအတွက်အခြားအာရုံခံဆဲလျကနေဆွတူညီသောအရင်းအမြစ်မှအနာဂတ်ဆွဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်;
အသစ်သင်ယူပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်မ may နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၌တည်ဖြစ်လာပေမည်။ အလားတူပင် LTP ရေတိုရေရှည်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များတွင် neuron sensitivity ကိုအတွက်အထက်ဖော်ပြပါတိုးနှင့်ပိုပြီးကြာရှည်ခံဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များပတျသကျတဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်ကိုထောကျပံ့ပေးသောစဉ်အတွင်းအစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိပြီး,
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ LTP နှင့်သင်ယူမှုအတွက်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကို (ဆဲလ်ပြကက်စကိတ်) ၏တူညီသောပာအချို့ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများ (ကြွက်များ၏ hippocampi အတွက်အင်ဇိုင်း (ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦး) ၏နှိပ်ကွပ်ထုတ်လုပ်မှု LTP ကာကွယ်နိုင်ပြီးဝင်္အကြောင်းကိုယခင်ကသင်ယူသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့တိရိစ္ဆာန်များ '' စွမ်းရည် inhibited ကြောင်းပြသအာဗေလ et al ။ , 1997).
LTP တိုင်းဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌လေ့လာတွေ့ရှိရသေးသော်လည်း (အနျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex, hippocampus နှင့် amygdala-အားလုံးဒေသများနှစ်ဦးစလုံးစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးKenney နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2008; Kombian နှင့် Malenka, 1994; Maren, 2005; Otani et al ။ , 2003).
Gene, မူးယစ်ဆေးဝါး, AND သိမြင်မှု
တစ်ဦးချင်းရဲ့ဗီဇမိတ်ကပ်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသူသို့မဟုတ်သူမ၏မှတ်ဥာဏ်ဖြစ်စဉ်များပွောငျးလဲပေးသောဖို့ဒီဂရီကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်စူးရှသောစိတ်ကြွဆေးမှတစ်ဦးချင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်တုန့်ပြန်၏အခြားရွေးချယ်စရာပုံစံများ၏ထားတဲ့အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မူတည် catechol-O-methyltransferase (COMT) သူသို့မဟုတ်သူမအမွေဆက်ခံထားပါတယ်ဗီဇ။
ဒါကဗီဇသည်အခြားမော်လီကျူးများအကြား, dopamine နဲ့ norepinephrine metabolizes တဲ့ပရိုတိန်း encodes ။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးဟာမျိုးဗီဇနှစ်ခုမိတ္တူ, အသီးအသီးသောမိဘများထံမှတဦးတည်းအမွေများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမိတ္တူ codon 158 မှာ valine တစ်ခုသို့မဟုတ် methionine DNA ကိုသုံးမွှာပူးဖြစ်စေရှိပါတယ်: အရှင်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှစ်ဦးကို valine (Val / Val) ရှိစေခြင်းငှါ, နှစ် methionine (Met / Met ), သို့မဟုတ်ဤတည်နေရာမှာ codons တစ်ဦးရောနှော pair တစုံ (Val / Met သို့မဟုတ် Met / Val) ။ တိုးမြှင့်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်အသွေးအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Val / Val တွဲဖက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှစူးရှစိတ်ကြွဆေး၏အုပ်ချုပ်ရေး, အ Wisconsin ပြည်နယ်ကတ် Sorting Task ကိုကို (dorsolateral prefrontal cortex မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏စမ်းသပ်မှု) နှင့်၎င်းတို့၏ prefrontal cortical function ကိုတိုးမြှင်ထိရောက်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက် အဆိုပါယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်စီးဆင်းမှု (Mattay et al ။ , 2003) ။ သို့သော်စူးရှသောစိတ်ကြွဆေးကတော့ Val / Met သို့မဟုတ် Met / Met တွဲဖက်မှုဖြစ်စေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သူများအားသာချက်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာက, Val / Val တွဲဖက်မှုလည်းတိုးလာ Impulse, စွဲနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ဉာဉျဆိုး (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Boettiger et al ။ , 2007).
ထို့ပြင် Val / Val တွဲဖက်မှုနှင့်အတူဆေးလိပ်သောက် (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာများ၏နှောင့်အယှက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှကြီးမြတ်သောသိမြင်တုန့်ပြန်ပြLoughead et al ။ , 2009) ။ ဤရလဒ်သည်သူတို့စွဲနှင့်ဆက်စပ်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အမူအကျင့်စရိုက်များပေါ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ဦး link ကိုသရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ genotype ဟာစွဲလမ်း phenotype ကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့ဥပမာများကိုပေးစွမ်းပါသည်ကွောငျ့မသာအရေးကြီးလှသည်။
ရေးသားသူမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်ပြင်းထန်စွာဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်ဦးအစောပိုင်းကဗားရှင်းဖတ်နေဘို့ဒေါက်တာ Sheree Logue နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့ဝင်များကျေးဇူးတင်ဖို့နဲ့လည်းအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်ထောက်ခံမှုအသိအမှတ်ပြုရန်, အမျိုးသား Institute မှချင်ပါတယ်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအချို့အဘို့အမျိုးသားကင်ဆာဌာန (AA015515, DA017949, DA024787 နှင့် P50 CA143187) ။
အာဗေလကို T, et al ။ LTP များ၏နှောင်းပိုင်းကအဆင့်နှင့် hippocampus-based ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတွက် PKA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏မျိုးဗီဇသရုပ်ပြ။ cell ။ 1997; 88 (5): 615-626 ။ [PubMed]
အာဗေလကို T, Lattal KM ။ မှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူ, စုစည်းပြီးနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2001; 11 (2): 180-187 ။ [PubMed]
et al Abrous DN ။ နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး hippocampal plasticity ချို့ယွင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22 (9): 3656-3662 ။ [PubMed]
et al Acuff-Smith က KD ။ ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်များနှင့်မျက်စိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဃ-စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှု၏စင်မြင့်-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 1996; 18 (2): 199-215 ။ [PubMed]
Aguilar, MA, Miñarro J ကို, Simons VM က။ အထီးကြွက်တွေမှာရှောင်ရှားဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုး-မှီခို impairing ဆိုးကျိုးများ။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 1998; 69 (2): 92-105 ။ [PubMed]
Argilli အီး, et al ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်ရေရှည်အလားအလာယန္တရားနှင့်အချိန်သင်တန်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28 (37): 9092-9100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bardo MT, Bevins RA ။ အေးစက်သောအရပ် preference ကို: အဘယျသို့ကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preclinical ဥာဏ် add သနည်း? Psychopharmacology (Berl) 2000; 153 (1): 31-43 ။ [PubMed]
Bean M က, Marrocco RT ကို။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုမမှန်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: reflex အာရုံစိုက်မှု၏အစိတ်အပိုင်း Norepinephrine နှင့် acetylcholine ဖျန်ဖြေခြင်း။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2004; 74 (3): 167-181 ။ [PubMed]
et al ဘဲလ် SL ။ နီကိုတင်းဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန။ 1999; 1 (1): 45-52 ။ [PubMed]
Biederman J ကို, et al ။ မိသားစုအန္တရာယ်အာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏လေ့လာဆန်းစစ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2008; 165 (1): 107-115 ။ [PubMed]
Blake က J ကိုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ articulatory ကွင်းဆက်အပေါ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုစမစ်အေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ လူ့ Psychopharmacology: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်။ 1997; 12: 259-264 ။
et al Boettiger, CA ။ ချက်ချင်းလူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်ဘက်လိုက်မှု: နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal ကွန်ရက်များနှင့် catechol-O-methyltransferase 158 (Val / Val) genotype များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27 (52): 14383-14391 ။ [PubMed]
et al ဘရောင်းလုပ် SA ။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏ Neurocognitive လည်ပတ်: ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000; 24 (2): 164-171 ။ [PubMed]
Cahill, L, McGaugh JL ။ စိတ်ခံစားမှု arousal နှင့်ကြာရှည်ခံ declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်၏ mechanisms ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1998; 21 (7): 294-299 ။ [PubMed]
Carlson, G, ဝမ် Y ကို, Alger BE ။ Endocannabinoids အဆိုပါ hippocampus အတွက် LTP ၏ induction လွယ်ကူချောမွေ့။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2002;5(8): 723-724 ။ [PubMed]
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ။ သန္ဓေသားအရက် Spectrum Disorders (FASDs) ရယူရန်နိုဝင်ဘာလ 6, 2009 ထံမှ www.cdc.gov/ncbddd/fas/fasask.htm.
et al Chang က L ကို။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူကလေးတွေအတွက်သေးငယ် subcortical volumes ကိုနှင့်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန: Neuroimaging ။ 2004; 132 (2): 95-106 ။ [PubMed]
et al Choi WS ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အပြုအမူဆေးပညာ၏ရာဇဝင်။ 1997; 19 (1): 42-50 ။ [PubMed]
ရင်ခွင် CC ကို, et al ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူသားသမီးများ၏အဖြူရောင်အမှု၌နိမ့်ပျံ့နှံ့။ အာရုံကြော။ 2009; 72 (24): 2068-2075 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Conners CK ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) Psychopharmacology သတင်းလွှာအတွက်နီကိုတင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်။ 1996; 32 (1): 67-73 ။ [PubMed]
et al Counotte DS ။ ကြွက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့ကြာရှည်မှတ်ဥာဏ်လိုငွေပြမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (2): 299-306 ။ [PubMed]
et al Dalley JW ။ ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမှု sequelae: အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရွေးချယ်သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30 (3): 525-537 ။ [PubMed]
et al Davis ကဂျာ။ နာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ C57BL /6ကြွက်တွေမှာ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ချို့ယွင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005; 25 (38): 8708-8713 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al del ON ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအလွန်တောင်းဆိုနေတာရေဝင်္တာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 195 (1): 19-25 ။ [PubMed]
Delanoy RL, Tucci DL, ရွှေ PE ။ dentate granules ဆဲလ်တွေအတွက်ရေရှည်အလားအလာအပေါ်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1983; 18 (1): 137-139 ။ [PubMed]
Devonshire ထားတဲ့ IM, Mayhew je, Overton PG ။ ကိုကင်းဦးစားမူလတန်းအာရုံခံ cortex ၏အထက်ပိုင်းအလွှာအတွက်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience ။ 2007; 146 (2): 841-851 ။ [PubMed]
Dopheide ဂျာ ​​Pliszka SR ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု-hyperactivity ရောဂါ: တစ်ခုက update ကို။ Pharmacotherapy ။ 2009; 29 (6): 656-679 ။ [PubMed]
Dwyer JB, Broide RS, Leslie FM ရေ။ နီကိုတင်းနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်သုတေသနအပိုင်းကို C: သန္ဓေသားယနေ့တွင်: ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2008; 84 (1): 30-44 ။ [PubMed]
declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်အဘို့အ Eichenbaum အိပ်ချ်တစ်ဦးက cortical-hippocampal စနစ်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2000; 1 (1): 41-50 ။ [PubMed]
Elkins IJ, McGue M က, Iacono WG ကို။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, အကငျြ့ရောဂါနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပေါ်လိင်၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2007; 64 (10): 1145-1152 ။ [PubMed]
Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်, ကြည့်ရှု RE ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurocircuitry: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2008; 154 (2): 261-274 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖာဂူဆ DM, Woodward LJ, Horwood LJ ။ ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ရောဂါညှိနှိုင်းမှုကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက် Maternal ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1998; 55 (8): 721-727 ။ [PubMed]
Franklin TR, et al ။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏လွတ်လပ်သောစီးကရက်ဆေးလိပ်တွေကိုမှ Limbic activation: တစ်ဦးက perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (11): 2301-2309 ။ [PubMed]
ကြော်စား PA ဆိုပြီး, Watkinson B, မွေးဖွားမီစီးကရက်နှင့် marihuana ထိတွေ့ 13 နှစ်အရွယ်မှ 16- အတွက်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် Grey က R. Differential ဆိုးကျိုးများ။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2003; 25 (4): 427-436 ။ [PubMed]
ကြော်စား PA ဆိုပြီး, Watkinson B, Pre-မူးယစ်ဆေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်-တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လျှင်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏ Grey က R. Neurocognitive အကျိုးဆက်များ။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2006; 28 (4): 517-525 ။ [PubMed]
et al Friswell J ကို။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ် opioids ၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 198 (2): 243-250 ။ [PubMed]
Galéraကို C, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကလေးဘဝနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက် Hyperactivity-inattention လက္ခဏာတွေ: အဆိုပါလူငယ်မင်ဒရယ်သဆောင်များတွင်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2008; 94 (1-3): 30-37 ။ [PubMed]
Goff, DC, Henderson, DC, schizophrenia အတွက်ဆေးလိပ် Amico အီးစီးကရက်: psychopathology နှင့်ဆေးဝါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှဆက်ဆံရေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1992; 149 (9): 1189-1194 ။ [PubMed]
et al တိန်း RZ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ neurocircuitry ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2009; 13 (9): 372-380 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gulick: D, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်တီဂျေ။ acute အီသနော C57BL /6ကြွက်တွေအတွက် foreground နှင့်နောက်ခံ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရေတိုနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အပေါ် biphasic သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2007; 31 (9): 1528-1537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hamilton က et al, BE ။ အရေးပါသောအစာရင်းဇယားများ၏နှစ်ပတ်လည်အကျဉ်းချုပ်: 2005 ။ ကလေးအထူးကု။ 2007; 119 (2): 345-360 ။ [PubMed]
Hernandez ll, ချစ်သူများနေ့ JD, ဝဲလ် DA ။ Pavlovian အေးစက်၏အီသနောတိုးမြှင့်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1986; 100 (4): 494-503 ။ [PubMed]
Hughes JR, et al ။ စိတ်ရောဂါပြင်ပလူနာအကြားဆေးလိပ်သောက်၏ပျံ့နှံ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1986; 143 (8): 993-997 ။ [PubMed]
Hughes JR, Keenan RM, စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုအပေါ်ဆေးရွက်ကြီးဆုတ်ခွာ၏ Yellin အေ Effect ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1989; 14 (5): 577-580 ။ [PubMed]
Hyman SE ။ စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏တစ်ဦးကရောဂါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005; 162 (8): 1414-1422 ။ [PubMed]
et al Iñiguez SD က။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းထိတွေ့လူကြီးတစ်ဦးစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (6): 1609-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Jacobsen LK ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက် abstinence ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဟားဗတ်။ 2005; 57 (1): 56-66 ။ [PubMed]
et al Jacobsen LK ။ တက်ကြွမိခင်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကထွန်းသစ်စ Visuospatial မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31 (7): 1550-1561 ။ [PubMed]
et al Jacobsen LK ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့အဖြူကိစ္စ microstructure ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု modulates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27 (49): 13491-13498 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ်က S, Bonci အေ Synaptic plasticity နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ ဆေးဝါးဗေဒအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2005;5(1): 20-25 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ဦးကရောဂါဗေဒ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005; 162 (8): 1403-1413 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: Shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 44 (1): 161-179 ။ [PubMed]
et al ကယ်လီ BJ ။ စူးရှသောကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်သိမှုချို့ယွင်း။ သိမှုနှင့်အပြုအမူ Neurology ။ 2005; 18 (2): 108-112 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကယ်လီကို C, McCreadie RG ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအလေ့အကျင့်, လက်ရှိရောဂါလက္ခဏာနှင့် Nithsdale, စကော့တလန်အတွက် schizophrenic လူနာ premorbid ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999; 156 (11): 1751-1757 ။ [PubMed]
Kenney JW, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်တီဂျေ။ hippocampus-မှီခိုသင်ယူမှုနှင့်နီကိုတင်းအားဖြင့် Synaptic plasticity ၏ Modulation ။ မော်လီကျူး Neurobiology ။ 2008; 38 (1): 101-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Khuder လုပ် SA, Dayal နာရီ, Mutgi AB ။ ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအသက်အရွယ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1999; 24 (5): 673-677 ။ [PubMed]
Kollins SH ။ ADHD, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်း, psychostimulant ကုသမှု: လက်ရှိစာပေနှင့်ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်များ။ အာရုံစူးစိုက်မှု Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2008; 12 (2): 115-125 ။ [PubMed]
Kombian SB, Malenka RC ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် NMDA-receptor-mediated တုံ့ပြန်မှု၏ Non-NMDA- နှင့်, LTD ၏တစ်ပြိုင်နက် LTP ။ သဘာဝ။ 1994; 368 (6468): 242-246 ။ [PubMed]
လမ်းဘတ်မိုင်, Hartsough CS ။ ADHD ၏နမူနာများနှင့် Non-ADHD သင်တန်းသားများအကြားဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို၏အလားအလာလေ့လာမှု။ သင်ယူမသန်မစွမ်း၏ဂျာနယ်။ 1998; 31 (6): 533-544 ။ [PubMed]
သည် Le Moal က M, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: ရောဂါမှ Pathways နှင့် pathophysiological အမြင်များ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 17 (6-7): 377-393 ။ [PubMed]
Leonard က S, et al ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 70 (4): 561-570 ။ [PubMed]
et al Loughead J ကို။ ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဦးနှောက် function ကိုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် abstinence စိန်ခေါ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု COMT genotype အားဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ Molecular Psychiatry ။ 2009; 14 (8): 820-826 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lyvers M က, Yakimoff အမ် Neuropsychological opioid မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2003; 28 (3): 605-611 ။ [PubMed]
အဆိုပါ amygdala အတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ Maren အက်စ် Synaptic ယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47 (6): 783-786 ။ [PubMed]
Mattay vs. တစ်ဦးက positron-ထုတ်လွှတ် tomography rCBF လေ့လာမှု: Dextroamphetamine "အာရုံကြောကွန်ရက်တိကျတဲ့" ဇီဝကမ္မအချက်ပြမှုများကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1996; 16 (15): 4816-4822 ။ [PubMed]
et al Mattay VS ။ စိတ်ကြွဆေးဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက် Catechol အို-methyltransferase val158-တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး genotype နှင့်တစ်ဦးချင်းအပြောင်းအလဲ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2003; 100 (10): 6186-6191 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al McEvoy JP ။ Haloperidol schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆေးလိပ်သောက်တိုးပွားစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1995; 119 (1): 124-126 ။ [PubMed]
McEvoy JP, Freudenreich အို Wilson က WH ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက် clozapine မှကုထုံးတုံ့ပြန်မှု။ ဟားဗတ်။ 1999; 46: 125-129 ။ [PubMed]
Mendrek တစ်ဦးက, et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်: Non-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် abstinence ၏သက်ရောက်မှုမှနှိုင်းယှဉ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2006; 31 (5): 833-844 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Miller ကကို C, မာရှယ် JF ။ ကိုကင်း-ဆက်စပ် Contextual မှတ်ဉာဏ်၏ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် reconsolidation များအတွက် molecular အလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47 (6): 873-884 ။ [PubMed]
Molina BS, Pelham WE ။ , ADHD နှင့်အတူသားသမီးများ၏တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု Jr ကလေးဘဝခန့်မှန်း။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2003; 112 (3): 497-507 ။ [PubMed]
et al Moriyama Y ကို။ အရက်နှင့် subacute ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်သိမြင်မှုပြန်လည်နာလန်ထူ၏မိသားစုသမိုင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 60 (1): 85-89 ။ [PubMed]
et al Naqvi နယူးဟမ်းရှား။ အဆိုပါ insula ပျက်စီးမှုစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315 (5811): 531-534 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nooyens AC အ, ဗန် Gelder BM, Verschuren WM ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားသိမြင်မှုကျဆင်း: အဆိုပါ Doetinchem အလိုက်လေ့လာရ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2008; 98 (12): 2244-2250 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nugent FS, Kauer ဂျေအေ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကျော်လွန်ပြီး GABAergic synapses ၏ LTP ။ ဇီဝကမ္မဗေဒအွန်လိုင်း၏ဂျာနယ်။ 2008; 586 (6): 1487-1493 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Ornstein တီဂျေ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဘိန်းဖြူချိုးဖောက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ profiles ။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 23 (2): 113-126 ။ [PubMed]
O'Shea M က, လို့ McGregor, ဆောက်ပုတ် PE IS ။ perinatal စဉ်အတွင်း cannabinoid ထိတွေ့ထပ်ခါတစ်လဲလဲ, ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုအလားတူ longlasting လိုငွေပြမှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်လျှော့ချ။ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2006; 20 (5): 611-621 ။ [PubMed]
Otani က S, et al ။ ကြွက် prefrontal အာရုံခံအတွက်ရေရှည် Synaptic plasticity ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2003; 13 (11): 1251-1256 ။ [PubMed]
et al ပက်တာက F ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုအကျဉ်း abstinence အောက်ပါရေတိုရေရှည်ဆေးလိပ်သောက်ပြန်လည်စတင်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2010; 106 (1): 61-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pauly JR, Slotkin က TA ။ ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်, နီကိုတင်းအစားထိုးခြင်းနှင့် neurobehavioural ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Maternal ။ Acta Paediatrica ။ 2008; 97 (10): 1331-1337 ။ [PubMed]
Penfield W က, အ hippocampal ဇုန်များတွင်နှစ်နိုင်ငံကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထုတ်လုပ် Milner ခမှတ်ဥာဏ်လိုငွေပြမှု။ Neurology နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ AMA မော်ကွန်း။ 1958; 79 (5): 475-497 ။ [PubMed]
Piper BJ, Meyer JS ။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် memory လိုငွေပြမှုနှင့်လျှော့ချစိုးရိမ်ပူပန်သည့် periadolescent ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း MDMA ကုသမှုပေးတော်မူ၏။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 79 (4): 723-731 ။ [PubMed]
et al Pomerleau CS ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပုံစံများနှင့်မျှမ ADHD, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ ADHD နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD symptomatology နှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်အတွက် abstinence ဆိုးကျိုးများ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2003; 28 (6): 1149-1157 ။ [PubMed]
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG, Jr က Gruber AJ, ဆေးခြောက်၏ Yurgelun-Todd ဃအကြွင်းအကျန် neuropsychologic ဆိုးကျိုးများ။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုအစီရင်ခံစာများ။ 2001;3(6): 507-512 ။ [PubMed]
et al Pulsifer ကို MB ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့: အသက်5နှစ်ပေါင်းမှာသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လက်တွေ့ကလေးအထူးကု။ 2008; 47 (1): 58-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Raybuck JD, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်တီဂျေ။ C57BL /6ကြွက်-high-ဆှဖှေဲ့ beta2 subunit ပါဝင်သောနီကိုတင်း acetylcholine receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအတွက်သဲလွန်စကိုကွောကျရှံ့အေးစက်အတွက်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 29 (2): 377-387 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Regier DA ။ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၏ Comorbidity ။ အဆိုပါ epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာ (ECA) လေ့လာမှုကနေရလာဒ်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1990; 264 (19): 2511-2518 ။ [PubMed]
Richards က M, et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့် midlife အတွက်သိမြင်မှုကျဆင်း: တစ်အလားအလာမွေးဖွားဆောင်များတွင်လေ့လာမှုကနေအထောက်အထား။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003; 93 (6): 994-998 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ရစ်ချတ်ဆန် GA ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရက်နှင့်ဆေးခြောက်ထိတွေ့: 10 နှစ်ပေါင်းမှာ neuropsychological ရလဒ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2002; 24 (3): 309-320 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုကမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း 2): S91-117 ။ [PubMed]
et al ရော်ဂျာ RD ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 20 (4): 322-339 ။ [PubMed]
Rukstalis M က, et al ။ hyperactive-ထကြွလွယ်သောရောဂါလက္ခဏာအတွက်တိုးမြှင့်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးအတွက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအကြား relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2005; 28 (4): 297-304 ။ [PubMed]
Ryback သည် RS ။ မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အရက်၏ဆိုးကျိုးများ၏စဉ်ဆက်နှင့်သတ်မှတ်ချက်။ တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးသုံးလပတ်ဂျာနယ်။ 1971; 32 (4): 995-1016 ။ [PubMed]
RE ကိုကြည့်ပါ။ relapse ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုကင်း-cue အသင်းအဖွဲ့များ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2005; 526 (1-3): 140-146 ။ [PubMed]
နီကိုတင်းဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှု induces စဉ် Semenova S က, Stolerman အိုင်ပီ, Markou အေနာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာရုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 87 (3): 360-368 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Setlow ခအဆိုပါနျူကလိယ accumbens နှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ်။ 1997; 49 (5): 515-521 ။ [PubMed]
Slamberová R ကို, et al ။ အဆိုပါနေရာအညွှန်းတာဝန်မက New-သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်သင်ယူခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 2005; 157: 217-219 ။ [PubMed]
et al Slotkin က TA ။ နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ဒေသများတွင်အချက်ပြ Adenylyl cyclase ဆဲလ်များနှင့်ကြာရှည်ခံသက်ရောက်မှု: ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ပေးထားနီကိုတင်းဖို့တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဦးနှောက်သုတေသနသတင်းလွှာ။ 2008; 76 (5): 522-530 ။ [PubMed]
et al Solowij N ကို။ ကုသမှုရှာကြံရေရှည်မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများ၏သိမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2002; 287 (9): 1123-1131 ။ [PubMed]
Stiglick တစ်ဦးက, Kalant အိပ်ချ်ကြွက်များတွင်ကြာရှည်ဆေးခြောက်ကုသမှုအပြီးတွင် radial-လက်မောင်းဝင်္အတွက်ချို့ယွင်းသင်ယူခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1982; 77 (2): 117-123 ။ [PubMed]
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (SAMHSA) DHHS အရက်ဆိုင်။ အမှတ် SMA 07-4343 ။ Rockville, MD: SAMHSA; 2007 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2006 အမျိုးသားစစ်တမ်းကနေရလာဒ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက်။ : မှာရရှိနိုင် www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k6NSDUH/2k6results.cfm#8.1.3.
Sullivan က JM ။ cannabinoids မှထုတ်လုပ်သောလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၏အခြေခံဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သင်ယူခြင်း & မှတ်ဉာဏ်။ 2000;7(3): 132-139 ။ [PubMed]
swan GE, Lessov-Schlaggar CN ။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဦးနှောက်အပေါ်ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးနှင့်အနီကိုတင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychology ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2007; 17 (3): 259-273 ။ [PubMed]
et al တန် YL ။ Comorbid စိတ်ရောဂါ diagnoses နှင့်ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်စိတ္တနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့။ စွဲအပေါ်အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007; 16 (5): 343-351 ။ [PubMed]
သောမတ်စ် AJ, O 'Brien JT ။ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့သိမှတ်ခံစားမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2008; 21 (1): 8-13 ။ [PubMed]
Thomasius R ကို, et al ။ လက်ရှိနှင့်ယခင် ecstasy (MDMA) အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ခံစားချက်, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် serotonin Transporter ရရှိနိုင်မှု: အဆိုပါ longitudinal ရှုထောင့်။ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2006; 20 (2): 211-225 ။ [PubMed]
Toro R ကို, et al ။ မိခင်ဆေးလိပ်ဆေးလိပ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှောက် cortex မှကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33 (5): 1019-1027 ။ [PubMed]
et al Vaglenova J ကို။ သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်နီကိုတင်း၏ကြာရှည် teratogenic သက်ရောက်မှု: AMPA အဲဒီ receptor function ကို၏ကျားမတိကျတဲ့နှင့်အခန်းကဏ္ဍကို။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 2008; 90 (3): 527-536 ။ [PubMed]
ဗန် Duijn CM, နီကိုတင်းစားသုံးမှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြား Hofman အေဆက်ဆံရေး။ BMJ ။ 1991; 302 (6791): 1491-1494 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Verdejo-Garcia တစ်ဦး, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ polysubstance အသုံးပြုသူများသည်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လိုငွေပြမှု၏ Perez-Garcia အမ်ကိုယ်ရေးဖိုင်: သီးခြားအလုပ်အမှုဆောင်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဘုံနှင့် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 190 (4): 517-530 ။ [PubMed]
et al Volkow ND ။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် dopamine ပို့ဆောင်ရေး၏ဆုံးရှုံးမှုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူပြန်လည်သက်သာ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21 (23): 9414-9418 ။ [PubMed]
et al Volkow ND ။ dorsal striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26 (24): 6583-6588 ။ [PubMed]
et al Volkow ND ။ ADHD အတွက် dopamine ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းသုံးသပ်စိစစ်: လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2009; 302 (10): 1084-1091 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဝမ် GJ ။ အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနေကြပြီးစိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2004; 161 (2): 242-248 ။ [PubMed]
et al Yates WR ။ နီကိုတင်း, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခို၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူရောဂါလက္ခဏာပေါ်သန္ဓေသားအရက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1998; 22 (4): 914-920 ။ [PubMed]
et al ယဉ်နာရီ။ အီသနောဟာ dorsomedial striatum အတွက်ရေရှည် Synaptic plasticity ၏ညှနျကွားနောက်ကြောင်းပြန်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2007; 25 (11): 3226-3232 ။ [PubMed]
Ziedonis DM, et al ။ နီကိုတင်းမှီခိုခြင်းနှင့် schizophrenia ။ ဆေးရုံနှင့်ရပ်ရွာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 45 (3): 204-206 ။ [PubMed]